HAMRAKHABAR | » शितल निवासमा नयाँ सुरक्षा सल्लाहकार काे आउदै छन ? शितल निवासमा नयाँ सुरक्षा सल्लाहकार काे आउदै छन ? – HAMRAKHABAR
शितल निवासमा नयाँ सुरक्षा सल्लाहकार काे आउदै छन ?
उता,सेनापतिका सैनिक सचिव विनयबिक्रम राणालाई पश्चिम पृतना पोखराको पृतनापति वा खरिद हेर्ने बिभाग सम्भारको रथी बनाइने सम्भावना बढेको छ । यसअघि रघु भण्डारीलाई पनि पृतनापतिमा नखटाई सम्भारमा राखिएको थियो । सम्भारमा राखेपछि हाकिमलाई सेनाको ठूलो परिमाणको खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर मिल्छ । त्यसैगरी प्रेम शाहीले दुई तारे पाउनासाथ सेनापतिपछिको शक्तिशाली अपरेसन बिभाग डिजिएमओ सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । प्रवन्ध रथी अशोक सिग्देललाई समेत पृतना जान परेको थिएन ।स्राेेत जनआस्था